Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ saịtị m ogologo oge, ị maara oke obi m na-enweta ụdị kaadị azụmaahịa dị iche iche. Enweela m kaadị mpempe akwụkwọ, kaadị kaadị, kaadị ọla, kaadị laminated… M na-anụ ụtọ ha nke ukwuu. N'ezie, na mkpọchi na enweghị ike njem, enweghi nnukwu mkpa maka kaadị azụmaahịa. Ugbu a, njem na-emepe, agbanyeghị, m kpebiri na ọ bụ oge imelite kaadị m wee nweta ụfọdụ n'usoro.
Otu ihe m na-atụkarị ụjọ bụ kaadị azụmaahịa ole ịzụrụ na mmadụ ole ga - eweta na mmemme ọ bụla. Ruo mgbe m mere na Linq. Linq nwere akara pụrụ iche nke kaadị azụmaahịa dijitalụ nwere NFC agbakwunyere. Ọ bụrụ na ị na-eso m ruo nwa oge, ị ga-amara na m jiri nnwale nke kaadị NFC n’oge gara aga ma ọ rụzighị. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ okwu na-ebipụta ha ma ebe URL na-aga bụ ihe na-erughị oke.
Nịm ọ bụla ebe na-aga ebe ị ga-amasị n'ime itu ukwu nhọrọ.
Site na kaadi nke mbu ha na ufodu nhazi, enwere m ike wuo omenala kaadị azụmahịa nwere akara m na ya (foto dị n’elu) na m nwere ike ịrapagidesi ike na ekwentị m wee dọpụta mgbe ọ bụla onye ọ bụla jụrụ ma ọ bụ enye m kaadị m. Kama ịnye onye ọ bụla kaadị azụmahịa, enwere m ike pịa ya na ekwentị ha ma ọ bụ na ha nwere ike i scanomi koodu QR na azụ ma na-ewetara m ozi ọdịda yana ozi m niile yana njikọ njikọta mbubata iji webata m ozi kọntaktị ozugbo na ekwentị ha!
Linq ọ bụghị naanị na-enye kaadị adịchaghị nke m zụtara, ha nwere nnukwu nhọrọ nke ngwaahịa ịhọrọ site na:
Linq mgbaaka - mgbaaka mgbaaka nke NFC agbakwunyere… naanị kpatụ mgbaaka ahụ na ekwentị gị na ebe ị na-aga ga-emepe.
Linq Band maka Apple Watch - otu Apple Watch nke ahụ bụ NFC agbakwunyere… naanị kpatụ band ahụ na ekwentị gị ma ebe ị na-aga ga-emepe.
Ọ bụrụ n’ị na-eme mmemme mmekọrịta mmadụ na ibe gị, Linq na-enye ndị ahịa bịara ya na ndị na-ere ahịa ya baajị. You nwere ike soro njikọ na njikọ aka gafere ndị bịara, ndị nkwado, na ndị mgbere!
Chọpụta karịa maka ngwaahịa na onyinye Linq na ụlọ ahịa ha n'ịntanetị:
Ngosipụta: M debara aha dị ka onye nnọchi anya Linq na m na-eji njikọ njikọ m na edemede a.
Tags: androidkaadị azụmahịacashappkaadị kọntaktịkọntaktị faịlụozi kọntaktịiPhone iOSzoolinqlinq pronfcnfc apụl bandNFL mgbaakakaadị azụmahịa nfckaadị azụmahịa nfcnfc bọtịnụanụ ọhịa